SATIRE | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
မင်းသားတွေက ကိုယ့်နေရာကိုယ် မနေကြတော့ဘူး ~ ဧရာ February 7, 2013
Filed under: OTHERS' NEWS,SATIRE,Videos — Nyo Gyi @ 4:53 pm
လူရွှင်တော်များသို့ အကြံပြုခြင်း September 18, 2012
Filed under: CARTOONS,MY POEMS,SATIRE — Nyo Gyi @ 3:54 pm
Actor Yan Aung Said That The Place Away from Men is Military January 24, 2011
Filed under: MY NEWS,SATIRE — Nyo Gyi @ 10:19 am
စာပါအကြောင်းအရာမှာ "…… ယောက်ျားတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာကို ထွက်သွားကြောင်း…" ပါရှိသည်ဆို၏။ ယင်းကို စိုးမြတ်သူဇာ၏ အဖေနေရာက သရုပ်ဆောင်သူ ရန်အောင်က "…. ယောက်ျားတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့- တပ်ထဲများ ၀င်သွားသလားမသိဘူး…" ဟု ပြောဆိုသော စကားပြောခန်းတစ်ခုပါဝင်ပေသည်။
INCREASED SALARY CAN’T STOP THE BURMESE PEOPLE’S CRYING January 11, 2010
YEAR 2010 & THAN SHWE January 7, 2010
Filed under: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING,CARTOONS,SATIRE — Nyo Gyi @ 12:56 pm
MYANMAR MILITARY ANIMALS? September 25, 2009